Afgambiga Suudaan: Hogaamiyaha milateriga oo wacad ku maray inuu 'xididdada u siibi doono maamulkii hore' - BBC News Somali
Afgambiga Suudaan: Hogaamiyaha milateriga oo wacad ku maray inuu 'xididdada u siibi doono maamulkii hore'
Image caption Janaraal Cabdulfataax Cabduraxmaan Burhaan ayaa waxa uu taleefishinka jeediyay hadallo dabacsan
Hogaamiyaha golaha milateriga ku meelgaarka ah ee Suudaan ayaa waxa uu wacad ku maray inuu "xididdada u siibi doono maamulkii hore" laba maalmood un kaddib markii uu dhacay afgambigii milateriga.
Isagoo ka hadlayay taleefishinka ayuu Janaraal Cabdulfataax Cabduraxmaan Burhaan ku dhawaaqay in dib loo qaabeyn doono hay'adaha qaranka, in la soo afjaray bandowga habeenkii iyo in la sii dayn doono maxaabiista siyaasadda u xiran.
Milaterigu waxa uu ilaalin doonaa "nabadda, kala dambaynta iyo ammaanka" guud ahaan Suudaan inta lagu guda jiro waqtiga kala guurka ah taas oo ugu badnaan qaadan doonta laba sanadood ilaa laga qabanayo doorashooyin xukunkana rayidka loogu wareejinayo, ayuu ku daray.
Isagoo adeegsanaya erayo dejin ah ayuu Janaraal Burhaan waxa uu mucaardka ugu baaqay "inay gacan ka siiyaan dib u soo celinta noloshii caadiga aheyd", isagoo ballanqaaday inuu maxkamadeyn doono kuwii dilay dibadbaxayaasha, waxa uuna wacad ku maray inuu musuq maasuqa la dagaalami doono.
Kooxaha mucaaradka ayaa la kulmay milateriga si ay uga wadaxaajoodaan "qorshaha ku meelgaarka ah".
Sida uu ku warramayo website-ka Baj News ee gaarka loo leeyahay hogaamiyaha Xisbiga Kongareeska ee Suudaan ee mucaaradka ah, Cumar al-Digeyr, ayaa sheegay in xubnihii mucaaradka matalayay ay dalbadeen in la dhiso dowlad rayid ah "awoodeeduna ay u dhammeystiran tahay" iyo in rayidka ay xukunka sii hayaan mudada ku meelgaarka ah.
Image caption Dibadbaxayaasha Suudaan ayaa mudaharaadayay muddo todobaadya ah
Xiriirka Xirfadlayaasha Suudaan kaas oo soo abaabulayay dibadbaxyada ayaa waxa uu ugu baaqay milateriga "inuu xaqiijiyo in si degdeg ah uu awoodda ugu wareejiyo xukuumad rayid ah oo ku meelgaar ah."
Dhibaaro dhaqaale oo sii kordhaysa ayaa dalka ku habsatay tan iyo markii ay 2011 ka go'day dalka intiisa kale qeybta koonfureed ee qaniga ku ah saliidda, afgambigii Khamiistiina waxa uu dhacay kaddib bilooyin ay socdeen deganaanshiyo la'aan ka dhalatay qiimaha oo sare u kacay.